Wararka - Nidaamkan cusub ee polymerization wuxuu albaabka u furayaa daaha ka hortagga maqaarka oo waxtar badan leh
Isku soo wada duuboo sheyga noolaha ah ee dusha sare ayaa caqabad ku ah maraakiibta dhoofinta iyo warshadaha biomedical Qaar ka mid ah maaddada polymer ee ka hortagga wasakhda wasakhda ah ayaa mari kara xaalufka oksidheer ee biyaha badda, taas oo ka dhigaysa kuwo aan waxtar lahayn muddo ka dib. eber) polymer-ka, oo la mid ah roogaga leh silsiladaha polymer-ka, ayaa soo jiitay fiiro ahaan beddelka suurtagalka ah, laakiin xilligan waa in lagu beeraa jawi aan firfircooneyn oo aan biyo iyo hawo lahayn.
Koox uu hogaaminayo Satyasan Karjana oo ka tirsan machadka A * STAR ee Sayniska Kiimikada iyo Sayniska ayaa daahfuray sida loogu diyaariyo daawooyinka loo yaqaan "amphoteric polymer" ee biyaha, heerkulka qolka iyo hawada, taas oo awood u siin doonta in loo isticmaalo cabbir aad u ballaaran.
Kooxdan ayaa isku dayaysa inay sameyso shaashado balaaran oo loo yaqaan "amphoteric polymer" iyagoo adeegsanaya qaab aad loo isticmaalo oo loo yaqaan "atom transfer radical polymerization", markay ogaadeen in falcelinta qaar aysan soo saarin wax soo saarkii la rabay. Dhamaadka silsiladda polymer-ka oo ah xarig loo yaqaan 'catalyst' oo loo adeegsaday falcelinta. "Waxay qaadan doontaa waqti iyo tijaabooyin taxane ah si loo soo bandhigo qarsoodiga [sida ay halkaas ku timid]," ayay tiri Jana.
Indha-indheynta Kiinikada, falanqaynta magnetic resonance spectroscopy (NMR) iyo falanqeyn kale ayaa tilmaamaya in amine ay bilaabaan polymerization iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka anion. Polymerizations-ka loo yaqaan anionic polymerizations uma adkeysan karo biyaha, methanol, ama hawo, laakiin polymerers-ka Jana waxay ku koreen dhamaan seddexda, iyaga oo u horseeday kooxda inay ka shakiyaan natiijooyinkooda Waxay u jeesteen moodellada kumbuyuutarka si ay u arkaan waxa dhacaya.
"Xisaabinta aragtida shaqada ee cufnaanta ayaa xaqiijineysa farsamaynta anionic polymerization," ayuu yiri. "Tani waa tusaalihii ugu horreeyay abid ee xallinta anionic polymerisation of monomers ethylene ee dhexdhexaadka aqueous ee xaaladaha aerobic ee daarran."
Kooxdiisa ayaa hada isticmaashay qaabkan si ay ugu soosaaraan iskabarada polymer-ka afar monomer monomers iyo tiro ka mid ah hindisayaasha anionic, oo qaarkood amineynin. ”Mustaqbalka, waxaan u isticmaali doonaa qaabkan si aan ugu abuurno lakab polymer-u adkaysta biomer-ka meelaha waawayn iyagoo adeegsanaya buufis ama habab uur-qaadis, ”ayay tiri Jana. Waxay sidoo kale qorsheynayaan inay daraasad ku sameeyaan saameynta antifouling ee dahaarka ee codsiyada Marine iyo biomedical